Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo soo dhaweeyay xabad joojinta laga gaaray dagaalo ka dhacay deegaanada miyiga ee kuyaala xadka gobolada Nugaal iyo Sool - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweyne ku xigeenka Puntland oo soo dhaweeyay xabad joojinta laga gaaray dagaalo ka dhacay deegaanada miyiga ee kuyaala xadka gobolada Nugaal iyo Sool
December 31, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiim Cumar Camay ayaa soo dhaweeyay heshiiska xabad joojinta ah ee laga gaaray dagaal beeleedyo ka dhacay deegaanada Qorilay iyo Cagaare ee kuyaala xadka gobolada Nugaal iyo Sool.
“Aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waana ku faraxsanahay in howshaas oo in muddo ah socotay ay hadda xaaladeedu meel fiican mareyso, waana ku hambalyeynayaa odayaasha ku jira nabad ku soo dabaadalida deeganadaas ay colaaduhu ka dhaceen,” ayuu Madaxweyne ku xigeenka ku yiri wareysi uu siiyay idaacad maxali ah oo la dhaho Radio Daljir.
Camay ayaa intaas ku daray in dowladda Puntland ay gacan balaaran ka geysan doonto sidii loo soo afjari lahaa colaada u dhaxeysa labadaas beelood ee walaalaha ah.
Sida ay ilo-wareedku sheegeen, muddo bil gudaheed ah ayaa lagu balamay in la qabto shirweyne lagu soo afjarayo colaada u dhaxeysa labada dhinac.
Asbuucyadii lasoo dhaafay, ugu yaraan 15 qof ayaa ku geeriyootay 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalo u dhaxeeya maleeshiyaad kasoo kala jeeda beel-hoosaadka Cumar Maxamuud iyo beesha Dhul-bahante oo ka dhacay deegaanada Qorilay iyo Cagaare.
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddiga xalinta khilaafaadka ayaa sii daayay liiska cusub ee baarlamaanka Puntland. In ka badan 40 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka ayaa ah kuwo cusub, oo intooda badan yihiin dhalinyaro, marka loo fiirsho liiska [...]
27 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay Puntland
Garoowe-(Puntland Mirror) 27 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay Puntland, Soomaaliya, Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sidaa bayaan ku sheegay maanta oo Isniin ah. Duqeynta ayaa Sabtidii ka dhacday [...]